Imfihlo: Khulisa iNtengiso yakho yeVenkile ye-Intanethi Ngeli qonga lipheleleyo leNtengiso ye-Ecommerce | Martech Zone
Ukuba neqonga lokuthengisa elilungiselelwe kakuhle kunye nelizenzekelayo yinto ebalulekileyo kuyo yonke indawo ye-e-commerce. Kukho izinto ezi-6 ezibalulekileyo ekufuneka zisetyenziswe nasiphi na isicwangciso sokuthengisa nge-e-commerce ngokubhekiselele kwimiyalezo:
Khulisa Uluhlu Lwakho -Ukongeza isaphulelo esamkelekileyo, i-spin-to-wins, i-fly-outs, kunye namaphulo okuphuma ngenjongo yokukhulisa uluhlu lwakho kunye nokubonelela ngesipho esinyanzelisayo kubalulekile ekukhuliseni abafowunelwa bakho.
amaphulo -Ukuthumela ii-imeyile ezamkelekileyo, iileta zeendaba eziqhubekayo, unikezelo lwamaxesha onyaka, kunye nezicatshulwa zokusasaza ukukhuthaza izibonelelo kunye neemveliso ezintsha kubalulekile.
Ukuguqulwa – Ukuthintela isivakashi ukuba sihambe ngemveliso kwinqwelo ngokunikezela ngesaphulelo kuyindlela entle yokunyusa izinga lokuguqulwa.
Ukulahlwa kwenqwelo - Ukukhumbuza abatyeleli ukuba babenemveliso kwinqwelo kufuneka kwaye, mhlawumbi, inomsebenzi omkhulu kunayo nayiphi na iqhinga lokuthengisa elizenzekelayo.
Amaphulo okuThengisa -Ukucebisa iimveliso ezifanayo yindlela entle yokunyusa ixabiso lenqwelo yabatyeleli bakho kwaye uqhube iintengiso ezongezelelweyo.
Top Bar inikeza -Ukuba nebar yokukhangela ephezulu kwindawo yakho ekhuthaza ukuthengiswa kwamva nje, unikezelo, okanye ingcebiso yemveliso iqhuba ukubandakanyeka kunye nokuguqulwa.
Winback yoMthengi – Nje ukuba umthengi athenge kuwe, ngoku balindele ukuba bathenge kwakhona kulula. Isikhumbuzo esilibazisekileyo okanye isithembiso siya kuqhuba uguqulo.
Thenga Ukulandelisa -Uphononongo lubalulekile kuyo yonke indawo ye-e-commerce, ke ukuba ne-imeyile yokulandela ecela ukuphononongwa, icebisa iimveliso, okanye ithi nje enkosi yindlela entle yokugcina abathengi bakho bebandakanyeka.
itemplates -Iitemplates eziqinisekisiweyo ezaziwa ngokuvula ukuvula, ukucofa, kunye nokuguqulwa kuyimfuneko ukwenzela ukuba abathengisi bangenalo uphando okanye ukuphuhlisa ngokwabo.
Iqonga leNtengiso ye-Ecommerce yabucala
I-Privy ibonelela nganye nganye yezi mpawu ukubonelela ngeqonga lokuthengisa le-e-commerce elipheleleyo lakho Shopify Ivenkile.
Ikratshi lelona qonga lijongwe kakhulu kwi Shopify Ivenkile yeApp… enevenkile ezingaphezu kwama-600,000 ezisebenzisa iqonga labo! Abaneli nje ukuba nelinye lawona maqonga afikelelekayo, iPrivy ikwanengqokelela ebanzi yezixhobo ze-intanethi ukuze ufunde indlela yokuthengisa ngcono ivenkile yakho ye-intanethi.
Nokuba awubhaliswanga, ndiyakucebisa kakhulu ukuba ubhalise kwaye ufumane i-Privy's IKhalenda yeHolide ye-Ecommerce. Yikhalenda onokuthi uyikhuphele, uyiprinte, kwaye uyigcine isesandleni… inayo nendawo yamanqaku. Baza kukuthumela nge-imeyile ngezikhumbuzo ezikhuthazayo kunye nenyanga ukuze ungaphoswa enye iholide.
Zama i-Privy Mahala
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco amdibeneyo Ikratshi kwaye Shopify kweli nqaku.
tags: Ukufumanaukulahlwa kwenqweloamaphulo okuthengisawinback yomthengiamaphulo e-ecommerceimeyile ye-ecommerceIzikhokelo ze-imeyile ze-ecommerceuphononongo lwe-ecommercei-imeyile ezenzekelayoemail Marketingitemplate ye-imeyileyandisa utshintshouluhlu lokukhulakuthengwa kwi intanethiamaphulo okuthenga kwi-intanethiliweyoiingcebiso ngemvelisoukuthenga ukulandelathengaIvenkile yokuThengisai-SMSspin-to-winukufumana umrhumoibha ephezuluibha yokukhangela ephezulu